Habka dalbashada gebi ahaanba waa khadka tooska ah. Riix halkan si aad uhesho Foomka 'LOI Level LOI'. Hal baaraha (xiriiriyaha koowaad ee soo jeedinta) ayaa looga baahan doonaa inuu sameeyo magaca adeegsadaha iyo erayga sirta ah (fadlan hayso magacaaga isticmaale iyo ereygaaga sirta ah sidaad ugu baahan doontid inta hawsha socoto); kadib buuxi waraaqda wejiga tooska ah oo ku shub sharax mashruuc laba bog ah oo aan ka badnayn laba bog oo tixraac ah; sawirro kasta waa inay ahaadaan xadka laba-bog ah. Fadlan hal-meel bannaan fogaan ah 12-qodob fogaannada iyadoo la adeegsanayo dhumucyo hal-inji ah. Sidaan A) sharraxaadda mashruuca iyo tixraacyada, iyo B) NIH Biosketches ee PI kasta waa in loo soo dhejiyaa sidii hal PDF ah.
Finalka waxaa lagu marti qaadi doonaa emayl ahaan si ay u soo bandhigaan soojeedin buuxda. Tartanku waa mid aad u kacsan; Codsadeyaasha waa lagu soo dhaweynayaa inay codsadaan wax kabadan hal jeer.
Musharax loogu talagalay abaalmarinta McKnight Neurobiology ee Abaalmarinta Maskaxda waa inuu u shaqeeyaa sidii baare madax-bannaan oo ka tirsan machad cilmi-baaris oo aan faa'iido doon ahayn oo ku yaal Mareykanka, waana inuu haystaa boos macallinnimo oo ah darajada Kaaliyaha Professor ama ka sareeya. Kuwa haysta cinwaanada kale sida Professor Professor, Adjunct Professor, Professor Research Track, Booqashada Professor ama Macallin xaq uma laha. Haddii hay'adda martida loo yahay aysan isticmaalin cinwaanno aqoon-isweydaarsi, warqad ka socota sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda (tusaale ahaan, Dean ama Agaasimaha Cilmi-baarista) waa inay xaqiijisaa in codsaduhu leeyahay ilo / hay'ad u gaar ah oo hay'adeed, sheybaar, iyo / ama tas-hiilaad.
Musharraxu ma qaban karo abaalmarin kale oo ka timaadda Sanduuqa McKnight Endowment Fund for Neuroscience kaas oo isku beddeli lahaa wakhtiga abaalmarinta Neurobiology of Brain Disorder award.
Letter of Inquiry Deadline: Monday, March 15, 2021
Full Proposal Deadline (for finalists): September 20, 2021
Funding begins February 1, 2022